Akhriso: Nuxurka Khudbaddii Madaxweyne Farmajo uu ka jeediyay New York – Radio Muqdisho
Waxa sharaf weyn ii ah inaan hadal ka jeediyo Fadhiga 74aad ee Shirweynaha Qaramada Midoobay. Waxaan si dhab ah u aaminsanahay in Shirweynahani uu qayb laxaadle ka qaato in la helo dadaallo dhinacyo badan oo ku aaddan ciribtirka saboolnimada, waxbarasho tayo leh, xal-u-helista cimilada, iyo in la xoojiyo wadajirka si sare loogu qaado ajendaheenna caalamiga ah ee in la helo horumar ay bulshadu udub-dhexaad u tahay si dhammaan loo gaaro barwaaqo iyo baraare.
Inteenan ku sugan halkan, waa inaan garwaaqsannaa isla markaana ka shaqaynaa sidii aan u hubin lahayn inaan cidla’ lagaga tegin qof iyo waddan toonna marka, qarnigan ku astaysan isku-xirnaanta iyo isku-tiirsanaanta la baadigoobayo horumarka iyo barwaaqada.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay si diirran u soo dhawaynaysaa hal-ku-dhigga sannadkan ee Shirweynaha Qaramada Midoobay oo dhammaanteen ina xasuusinaya muhiimadda ay leedahay inaan laban-laabno dadaalkeenna innaga oo iskaashi caalami ah oo intan ka sii ballaaran yeelanayna si aan u hubinno in dal kasta oo innaga mid ahi gaaro Yoolalka Horumarka Waara ee yaraynta saboolnimada, sare u qaaddida tayada waxbarahada, wax ka qabashada saamaynta taban ee Isbeddelka Cimilada iyo inaan dhammaan dadaallada gudaha dalalkeenna ku salayno iskaashi iyo hannaan loo dhan yahay. Noocyada kala duwan ee Iskaashiyadu waa waajib haddii aan doonayno inaan ka gudubno caqabadaha ugu waaweyn ee aan wadaagno waqtigan, sida amniga, saboolnimada iyo isbeddelka cimilada.
Adduunkan isku xirmay, ma jiro waddan, si kasta oo uu qani u yahay, u awood badan yahay una diyaarsan yahay, keligii u babbac dhigi kara caqabadaha caalamiga ah ee u baahan in si wadajir ah wax looga qabto loogana jawaabo. Waa inaan ku dadaalnaa sidii aan u abuuri lahayn jawigii loo baahnaa si aan keli-keli iyo wadajir ahaanba u gaarno barwaaqo, iyada oo la raacayo Yoolalka Xalalka Waara.
Soomaaliya waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaraysaa horumarka bulsho iyo dhaqaale ee Geeska Afrika, waxaanuna kalsooni ku qabnaa in iskaashiga ka dhexeeya dalalka Geeska Arika ay sare u qaadi doonto horumarka dhaqaale, xasiloonida siyaasadeed, isku xirnaanta bulsho iyo dhaqan, iyo tan ugu muhiimsan oo ah iskaashiga dhanka ammaanka ee u dhexeeya dalalka Geeska.
Gobolka Geeska Afrika waxa ka jira fursado badan oo koboc iyo horumar dhaqaale oo ay dadkiisu ka faa’idaysan karaan haddii aan sii xoojinno xiriirka siyaasadeed, bulsho iyo dhaqaale ee u dhexeeya dalalkeenna iyo saaxiibbada caalamka. Dalalka Geeska Afrika keligood kuma aha dadaaalka ay ugu jiraan inay dalalkooda iyo dadkooda u suurtageliyaan mustaqbal wanaagsan maxaa yeelay waxaan leennahay saaxiibbo badan oo dhammaanteen arrintaas nagu garab taagan iyaga oo uga dan leh in nabad iyo amni laga suurtageliyo caalamka oo dhan, waana u mahadcelinaynaa.
Soomaaliya iyo Kenya waa laba waddan oo deris ah isla markaana ku teedsan Xeebta Badweynta Hindiya oo leh xiriir saaxiibtinnimo oo nabdeed. Abaal ayaan Kenya uga haynnaa taageeradii hagar la’aaneed ee ay sannado badan la garab taagnayd shacabka Soomaaliyeed. Walow xiriirkayaga guud uu fiican yahay, haddana xuduuddayada dhanka badda weli lama jaangoyn, taas ayaana sal u ah is-fahanwaaga u dhexeeya labada dal ee walaalaha ah.
Wadahadalladii laba geesoodka ahaa heshiis waa lagu gaari waayey. Si marka loo helo xal nabdeed oo caddaalad ah, sannadkii 2014, Soomaaliya iyada oo raacaysa sharciga caalamiga ah ayay bilawday inay dacwadda horgeyso Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda oo ah hay’adda sharci ee ugu sarraysa Qaramada Midoobay. Waxaan ku faraxsannahay in Maxkamaddu caddaysay inay sharciyad iyo awood u leedahay inay ka garnaqdo khilaafka, isla markaana ay dhegaysiyadii ugu dambeeyay ee kiiska u qoondaysay toddobaadka ugu horreeya November.
Dowladdu, laga soo bilaabo markii aan xafiiska la wareegay waxa ay xoogga saartay, kharashka ugu badanna ku bixisay amniga maxaa yeelay waxa ku xiran dhammaan arrimaha kale sida tirtiridda saboolnimada, waxbarasho tayo leh, wax ka qabashada cimilada iyo wadajirka. Annaga oo kaashanayna saaxiibbadeenna caalamka ayaan waxaan si joogto ah uga shaqaynnaa tirtiridda argagaxisada xagjirka ah iyo hawlgalladooda Soomaaliya. Arrintani marna ma aha mid fudud sababta oo ah Al-Shabaab waxay adeegsataa taaktikooyin cunfi iyo fulaynimo ku astaysan sida qarxinta muwaaddiniinta aan waxba galabsan iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay.
Si kastaba, marka la eego istaraatijiyaddeenna guud ee xagjirnimada lagaga badbaadinayo dadka qaybta ka ah, hawlgallada milatari ee guulaystay, deegaannada laga qabsaday Al-Shabaab iyo xoojinta awoodda Ciidanka Qaranka Soomaaliya, waxaan ku kalsoonnahay in dadaallada wadajirka ah ee aan la leennahay AMISOM iyo saaxiibbadeenna caalamka ay miradhalayaan, taasi oo ay faa’ido ugu jirto Soomaaliya, shacabkeeda iyo sidoo kale xasiloonida gobolka iyo caalamka.
Soomaaliya waxa ka go’an inay wax ka qabato xaaladda uu ku sugan yahay deegaanka dalku iyo in sare loo qaado adkaysiga bulshada ee jiilka hadda iyo kuwa soo socda. Soomaaliya waxay qaadday tallaabooyin waaweyn iyada oo hay’adaha maaraynta deegaanka ku jihaysey inay sameeyaan isbeddello heer Qaran ah.
Tusaale ahaan, yagleelidda Waaxda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaruhu waa tallaabo dhanka saxda ah loo qaaday, waxaanuna ku kalsoonnahay in Waaxdaasi ay si waxtar leh u hoggaamin doonto dhaqangelinta shuruucda iyo siyaasadaha deegaanka. Tani waxay caddayn u tahay sida ay nooga go’an tahay inaan wax ka qabanno cimilada si loo helo deegaan fiican, nadiif ah isla markaana barwaaqaysan.
Sida ay Hay’adda Lacagta Adduunku qabto, guusha aan ilaa hadda gaarnay waa mid weyn, waqti yar gudaheedna waxa noogu qabsoomay wax badan. Waxaan ku hawlannahay inaan si joogto ah u kordhinno dakhliga gudaha, hagaajinno hannaanka miisaaniyadda Qaranka, iyo inaan nidaamkeenna dhaqaale ka dhigno mid daah-furan oo la isku hallayn karo. Waxaan si dhaw saaxiibbadeenna caalamka iyo daneeyayaasha, sida shacabka Soomaaliyeed iyo Hay’adaha Maaliyadeed ee Adduunka, ugala shaqaynaynaa sidii Soomaaliya deynta looga cafin lahaa.
Gaarista himiladani waxay Soomaaliya u oggolaanaysaa inay hesho khayraad muhiim ah aadna loogu baahan yahay oo kabaya dakhliga gudaha si aan dhaqaale ugu helno hawlaha ciribtirka sabooolnimada, bixinta adeegyada dowladda, sida waxbarasho tayo leh iyo amni iyo inaan tallaabooyin waxtar leh qaadno si aan uga gaashaamanno masiibada cimilada ee mustaqbalka.
Madaxweynaha JFS oo Caalamka u Cadeeyey Mowqifkiisa ku aadan Kiiska Badda